KONKE MALUNGA NOTSHINTSHO LWAMAGAMA EMARYLAND - UBOMI BOMTSHATO
Eyona Ubomi Bomtshato Ungalitshintsha njani igama lakho eMaryland emva kokuba utsaliwe
Ungalitshintsha njani igama lakho eMaryland emva kokuba utsaliwe
Nantsi into ekufuneka uyazi ukwenza inkqubo ibe lula. Ilungile
Ukuhlaziywa ngoMeyi 26, 2020 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Ukutshintsha igama lakho emva kokuba utshatile akufuneki — lukhetho lomntu ngamnye. Kodwa ukuba uza kuhamba ngale ndlela, yazi ukuba ukufumana igama eliguqukayo eMaldin kuya kuthatha umsebenzi omncinci. Ngapha koko, kukho amanyathelo kunye neefom ezaneleyo zokuzigcwalisa sicebisa ukuba ujonge iHitchSwitch, inkonzo yokugcina uxinzelelo eyenzela phantse yonke into. Ngokukrakra… konke wena kufuneka uyenze kukugcwalisa iphepha lemibuzo elilula. (Ithatha iyonke Ntathu imizuzu ngokuchasene neeyure obuya kuzichitha uphanda ukuba ngawaphi amaxwebhu uwafunayo.) Ukusuka apho, iHitchSwitch iyakukuthumela iphakheji ebhalwe igama (kubandakanya amaphepha agcwaliswe ngokuzenzekelayo kunye nemiyalelo yokungenisa) echaza ngokuthe ngqo ukugcwalisa igama lakho elisemthethweni eMaryland.
Andiqinisekanga ukuba uzimisele ukuhlawulela inkonzo ukunceda? Sichaze inkqubo epheleleyo yokutshintsha amagama abahlali baseMaryland apha ngezantsi. Fumanisa ukuba kuthatha ntoni ukuthatha igama elitsha, emva koko uthathe isigqibo sokuba ukukhupha umsebenzi yinto onomdla kuyo.
Indlela yokufumana ilayisenisi yomtshato waseMaldan
Isinyathelo sokuqala sokutshintsha igama lakho lokugqibela eMaldin kwenzeka ngaphambi kokuba utshate: Kukufumana ilayisensi yakho yomtshato. Ukuba ukhona Ukubopha iqhina kwi-MD , Qala ngokunxibelelana ne iofisi yaseburhulumenteni okanye yesixeko kwindawo oza kutshata kuyo. Wena kunye neqabane lakho elizayo ninokufaka isicelo kunye, kodwa nobabini akufuneki nibekhona.
Xa ugcwalisa iphepha-mvume lokutshata, faka igama lakho lomtshato olifunayo — oku kuyakwenza lula kakhulu ukuba wenze igama elisemthethweni emva komtshato. 'IMaryland, njengamanye amazwe, ingqongqo kwindlela elihamba ngayo igama,' utshilo uJake Wolff, ingcali yethu yokutshintsha igama kunye nomseki weHitchSwitch. Uchaza ukuba utshintsho lwegama oluvela kwilayisenisi yomtshato waseMaldin (kwaye leyo kwigama lokugqibela lomlingane okanye ukuxhamla kwamagama okugqibela omlingane) zilungele ngqo ukwenza igosa kamva. Kodwa ukuba wena sukuyenza Dwelisa igama lakho elitsha kwilayisensi yomtshato kunye / okanye lutshintsho oluntsonkothileyo, kuya kufuneka ucele inkundla ukuba yenze olo tshintsho lwamagama.
'Ke xa ufaka isicelo selayisensi yomtshato eMaryland, kwaye ucinga ukuba ungathanda ukutshintsha igama lakho nangaliphi na ixesha, yenza olo tshintsho,' utshilo uWolff. Ukubhala igama elitsha phantsi akuthethi ukuba igama lakho litshintshiwe ngokusesikweni-lithetha nje ukuba uzimisele ukutshintsha kwaye likuvumela ukuba usebenzise iphepha-mvume lakho lomtshato njengexwebhu elisemthethweni lokutshintsha uxwebhu kamva.
Zeziphi iifom ozifunayo?
Amacandelo ahlukeneyo aneemfuno ezahlukeneyo, ke tsalela uMabhalane weNkundla weSekethe wakho ukuba ufumanise ukuba zeziphi iindlela zokuchonga ozifunayo, kunye nokuba ngawaphi amaphepha ekuya kufuneka uwagcwalise.
Iindleko zelayisenisi yomtshato waseMaldin ukusuka kwi-30 ukuya kwi-85 yeedola, kuxhomekeke kwi-ofisi kamabhalane.
Ilayisenisi yomtshato waseMaryland iphela emva kweenyanga ezintandathu, ke ngokuqinisekileyo faka isicelo ngaphakathi kwewindow yexesha ngaphambi komtshato. Kukho ixesha lokulinda leentsuku ezimbini phakathi kwexesha ofumana ngalo iphepha-mvume lakho naxa uvumelekile ukutshata ngokusemthethweni. Ngolwazi oluthe kratya malunga neelayisensi zomtshato eMaryland, khetha ikopi yethu Ingcaciso Imagazini yengingqi yeDC, Maryland neVirginia.
Ukudibanisa iqhina ngaphandle kwelizwe? Kwimeko apho, faka isicelo sephepha-mvume lomtshato apho. Jonga ilizwe, i-county okanye iimfuno ezithile zelizwe.
Indlela yokufaka isicelo sokutshintsha igama eMaryland
Ukuba awulubhalanga utshintsho lwakho lwegama olifunayo kwilayisensi yakho yomtshato yaseMaryland — okanye ukutshintsha kwegama lakho kunzima kakhulu kunokuthatha ifani yeqabane lakho elizayo- kungafuneka wenze isicelo sokutshintsha igama eMaryland. Uya kufaka le fayile kunye nenkundla yesekethe yendawo yakho. Kuya kufuneka unxibelelane nenkundla ukufumana imiyalelo eneenkcukacha, kodwa Iwebhusayithi yeeNkundla zeMaryland inikeza ulwazi olusisiseko ukuze uqalise.
Ukufumana utshintsho olusemthethweni eMaryland-kwaye, naphina e-US-kufuna ukufayilwa kwamaphepha kuLawulo loKhuseleko lweNtlalo. Kuya kufuneka utshintshe igama lakho kunye ne-SSA ngaphambi kokuba uzame ukuhlaziya ipasipoti yakho kunye nelayisensi yokuqhuba.
Yiya e SSA.gov ukuprinta kwaye ugcwalise Ifom SS-5 . Kwiimeko ezininzi, unokukhetha ukuthumela imeyile okanye ukuhambisa ngesandla isicelo sakho. ( Nantsi indawo yeofisi ye-SSA Ukukunceda ufumane enye ekufutshane.) Xa ufaka isicelo sekhadi elitsha loKhuseleko lweNtlalo, kuya kufuneka ubandakanye:
Ubungqina besazisi (iphepha-mvume lakho lokuqhuba, i-ID yelizwe okanye ipaspoti, umzekelo)
Ubungqina bokuba ngummi (isatifikethi sakho sokuzalwa okanye ipaspoti) -kodwa kuphela ukuba awukakumiseli oku kwi-SSA
Ngaphambi kokuba ungene ngaphakathi, funda ezi zinto imiyalelo yokufumana ikhadi elilungisiweyo ke uyazi ngqo ukuba ungasifaka njani isicelo kwimeko yakho eyahlukileyo.
ohlawulela iilokhwe zontombi
Iindaba ezimnandi! Ukutshintsha igama lakho kwi-SSA kukhululekile.
Kuya kufuneka ungenise amaxwebhu okuqala okanye aqinisekisiweyo-i-SSA ayizamkeli iikopi.
UWolff ucebisa ukuba itshintshe ipasipoti yakho ngokulandelayo, kuba ipasipoti enegama lakho elitsha isebenza njengefom yesazisi ukubonisa iMaryland MVA xa igama lakho litshintshiwe.
Ukutshintsha igama lakho kwipaspoti yinkqubo efanayo efanayo kwi-US yonke, kodwa iinkcukacha ziyahluka kumntu kumntu. Bona i Isebe likarhulumente lase-US iwebhusayithi ngeenkcukacha zokutshintsha igama lakho kwipasipoti yakho ngokusekwe kwimeko yakho eyahlukileyo.
Kuyaxhomekeka. Uya kudinga enye yezi zinto zintathu:
1. Ukuba ucela utshintsho lwegama kwisithuba sonyaka wokufumana ipaspoti yakho yangoku, sebenzisa Ifom DS-5504 .
Faka isicelo ngokuthumela ngeposi:
Uxwebhu oluqinisekisiweyo lokutshintsha igama
Ifoto yencwadana yokundwendwela (ethi ibandakanywe kwi-HitchSwitch's $ 99 package)
2. Ukuba unencwadana yokundwendwela yangoku, ikwimeko entle, yakhutshwa xa ubuneminyaka eli-16 ubuncinci, kwaye yakhutshwa kwiminyaka eli-15 edlulileyo, sebenzisa Ifom DS-82 .
3. Ukuba awuweli kwezi ndidi zingasentla, kuya kufuneka ufake isicelo sepaspoti entsha Ifom DS-11 . Kwipasipoti entsha, kuya kufuneka uye buqu ukuya Isixhobo sokwamkela iPasipoti (okanye iSebe le-Arhente kaRhulumente yokundwendwela ngenkonzo ekhawulezileyo).
Faka isicelo kunye:
Ubungqina besazisi, kunye nefotokopi
Ubungqina bokuba ngummi, kunye nefotokopi
Ukuhlaziywa kwepaspoti ngeDS-5504 kusimahla. Ngaphandle koko, kubiza i- $ 110 kwincwadi yokundwendwela kunye / okanye kwi-30 yekhadi. Kodwa ngepasipoti entsha kraca (ukhetho lweDS-11), kuya kufuneka uhlawule iidola ezingama-35 kwimirhumo eyongezelelweyo. Ngaba uyayifuna ngokukhawuleza? Ngama- $ 60 ongezelelweyo, unako ukukhawulezisa inkonzo yakho .
Kubaluleke kakhulu: Ukuba uhamba ngaphambi okanye emva utshintsho lwegama lokundwendwela , Qiniseka ukuba igama lakho kwitikiti lenqwelomoya liyahambelana negama elikulo ipaspoti yakho ngela xesha.
Ulufumana njani utshintsho lweLayisensi yeDrayivu eMaryland
Ukufumana utshintsho ngegama kwiMaryland MVA (Umbutho weZithuthi) kulula. Kodwa ngelishwa, ayinakwenziwa kwi-intanethi okanye ngeposi. Endaweni yoko, kuya kufuneka uye kwi-MVA yakho yendawo.
Yiza nesatifikethi sakho somtshato okanye inkundla iyalele amaxwebhu okutshintsha amagama kunye nelayisensi yakho yokuqhuba yaseMaldin.
Ukuba ufumana okanye sele unesazisi sokwenyani, unokufuna uxwebhu olungaphezulu. Jonga oku isikhokelo soxwebhu kwi-Intanethi ukwenza uluhlu lokutshekisha lwamaxwebhu afunekayo ngokweemfuno zomntu ngamnye (kunye nokwenza idinga kwi-intanethi).
Ixabisa i $ 20 ukufumana ilayisensi yokuqhuba engeyiyo yorhwebo elungisiweyo eMaryland.
Iphepha-mvume lakho elilungisiweyo liya kuthi igama lakho elitsha lithunyelwe ngeposi kamva. Fumana ngakumbi malunga nenkqubo kwi Iwebsite yeMVA .
Indlela yokutshintsha igama lakho eMaryland
Ngelixa lawo engamanyathelo aphambili okutshintsha igama lakho eMaryland, awukenziwa ngokupheleleyo. Ungalibali ukwabelana ngeendaba no:
Indawo osebenza kuyo
Iinkampani zakho zebhanki kunye nekhadi letyala
I-inshurensi yakho kunye nabanikezeli bezempilo
Enye iakhawunti kunye neearhente zokurekhoda
Siyazi ukuba yonke le nto inokuba yinto eninzi yokugcina umkhondo wayo, ke ukuba uziva ukhathazekile, cinga ngokujonga iHitchSwitch. Inkonzo iyenza lula inkqubo yokutshintsha kwegama, ngakumbi kuba ikunika uluhlu lokujonga olwenzelwe wena. Uyakuthanda ukuba nezinto ezimbalwa eziza kwenziwa emveni kwayo yonke imincili yokutshata. Kwaye awungekhe usebenzise uxinzelelo oluncinci?
amakhonkco wesithembiso sesilivere emadodeni
amaqabane amnandi acaphula kuye
utshata njani kwindlu yenkundla yaseTexas
ngubani umzalwana ka-ariana grande
Iikhabhathi zasekhitshini ezimnyama zom-oki
Iinwele zeendwendwe zomtshato iinwele eziphakathi